Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie ayaa u Diyaargaroobaya Kordhinta Guryaha - Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie ayaa u Diyaargaroobaya Qulqulka Guryaha
by Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie | Oct 8, 2021 | Warar & Maqaallo Dhawaan, Uncategorized
Moratorium ka saarida Illinois ayaa dhamaaday Axadii, Oktoobar 3, 2021. Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waxay durba arkeen tirada kiisaska ka saarida oo sii kordhaysa. Sida laga soo xigtay Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Mareykanka, tirooyinka ayaa la filayaa “inay sare u kacaan si qiyaas ahaan ay u labanlaabaan heerarkoodii hore ee masiibada.” Pre-COVID, Peoria waxay horey u lahayd mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee laga saaray dalka.
Si siman u helidda caddaaladda iyada oo aan loo eegin asalka qofka ama heerka dakhli waa mid ka mid ah fikradaha ugu sarreeya mihnadda sharciga. Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie waa la diyaariyay waxayna diyaar u yihiin inay u adeegaan bulshadeena inta lagu guda jiro ka bixitaanka si loo hubiyo in si siman loo helo caddaaladda.
Gobolka Prairie wuxuu xoogga saaray dadaalladiisa intii lagu jiray joojinta oo dhan si loo baro bulshada, la shuraakowdo dhowr hay'adood oo bixiya kaalmo, iyo ka caawinta kiraystayaasha iyo mulkiilayaasha inay ku xirnaadaan gargaarkaas. Khayraadka ayaa wali u bannaan milkiilayaasha iyo kiraystayaasha labadaba. Habka ugu waxtarka badan ee dadka ku jira bulshada Peoria ay ugu xiriiraan gargaarka ugu habboon baahidooda waa iyaga oo waca 2-1-1 (309-999-4029) ama booqashada www.211hoi.org.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira barnaamijka gargaarka kirada ee ku saleysan gobolka oo bixin kara ilaa 15 bilood oo ijaar ah. Kani waa codsi wadajir ah, oo uu bilaabay kiraystuhu oo uu dhammaystiray mulkiiluhu. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa ilrpp.ihda.org ama adoo wacaya 866-454-3571.
Caawinta kiraystayaasha ayaa sidoo kale laga heli karaa dhowr urur oo maxalli ah sida Phoenix CDS, Salvation Army, PCCEO, St Vincent de Paul iyo kuwo kale oo haysta kaalmo si looga hortago ka saaridda, laakiin sidoo kale gargaar loogu talagalay dadka horay loo saaray. Hindisaha Gobolka Qoysaska Caawinta Illinois wuxuu u fududeeyaa oo dhaqso u siiyaa shaqsiyaadka inay bilaabaan habka codsiga caawimaadda la xushay. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa www.helpillinoisfamilies.com. Ugu dambayn, Gobolka Prairie wuxuu ku bixiyaa kheyraadka sida Buug -gacmeedka Kiraystayaasha bilaashka ah iyo Qalabka Ka -saaridda websaydkayaga, www.pslegal.org.
Milkiileyaasha iyo milkiileyaasha guryaha, waxaa jiri doona lacago aad u badan si looga hortago in guryaha lumiyo dakhli lumay awgeed. Macluumaadka barnaamijkan soo socda ayaa laga heli doonaa www.ihda.org/haf. Intaa waxaa dheer, guryaha amaahda badankoodu waxay leeyihiin ikhtiyaarro gargaar oo kala duwan, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah barnaamijyada wax -ka -beddelka oo la fududeeyey iyo barnaamijyada dulqaadka. Si aad wax badan u baratid, milkiilayaasha iyo milkiileyaasha guryaha ayaa booqan kara www.consumerfinance.gov/coronavirus/mortgage-and-housing-assistance.
Wixii talo ah ee ku saabsan ka saarida, mulkiilayaasha iyo kiraystayaashu waxay la xiriiri karaan Ka-saaridda Illinois iyagoo wacaya 855-631-0811, u-qorista “Caawinta Ka-saaridda” 1-844-938-4280, ama booqashada www.evictionhelpillinois.org. Caawinta Ka -saaridda Illinois waxay bixin kartaa gargaar sharci oo lacag -la'aan ah, adeegyo dhexdhexaadin, iyo isku -xidhnaanta kaalmooyinka kale. Gobolka Prairie waa shuraako firfircoon barnaamijkan waxaana laga yaabaa in kiraystayaasha aagga Peoria loo diri doono xafiiskayaga si ay u helaan caawimaad xagga sharciga ah.
Bixiyeyaasha adeegga, Gobolka Prairie wuxuu sii wadaa inuu bixiyo hannaan gudbinta oo la fududeeyey si dhakhso loogu baaro u -qalmitaanka iyo ku xiro macaamiishaada qareen guri. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ka wada hadalno sida ururadeenu ay iskaashi ula yeelan karaan si loo gaaro ahdaafta guud iyo inaan shaqaalahaaga siinno tababar ku saabsan arrimaha guryaha sida ka saaridda, guryeynta caddaaladda, ama deggenaanshaha.
Qareennada, Gobolka Prairie wuxuu u sameeyay barnaamij xooggan oo pro bono ah si uu si gaar ah wax uga qabto qulqulka ka saaridda. Haddii aad tahay qareen oo aad jeceshahay inaad ku tabarucdo, fadlan ka fikir inaad ku biirto mashruucan. Waxaa loogu talagalay inay ku habboon tahay jadwalkaaga waxayna ku lug leedahay la -talinta macaamiisha taleefanka. Gobolka Prairie wuxuu bixiyaa tababar sidoo kale wuxuu bixiyaa caymis xumo.
Laanta Peoria ee Gobolka Prairie waxay ballaarisay Mashruuca Kiliiniga Maxkamadda Ka -saaridda si loogu daro laba qareen mid kasta oo ka tirsan Degmada Peoria iyo Tazewell County wicitaankii maxkamadda ka saaridda. Waxaan kula talinaa kiraystayaasha xuquuqdooda, waajibaadkooda, iyo fursadaha ay ku leeyihiin maxkamadda ka saarida marka ugu horeysa ee adeeg-bixiyaha ah waxaana laga yaabaa inay sidoo kale bixiyaan matalaad. Shakhsiyaadka waxay kaloo codsan karaan adeegyada sharciga kahor iyagoo wacaya 309-674-9831, Isniinta ilaa Khamiista, 9 AM ilaa 1 PM ama onlayn www.pslegal.org.
 Warsaxaafadeed, Merrick B. Garland, Xeer Ilaaliyaha Guud (Ogosto 30, 2021), https://www.justice.gov/ag/page/file/1428626/download
 Darajooyinka Ka saarida, Shaybaadhka Guriga, https://evictionlab.org/rankings/ (booqashadii ugu dambaysay Oktoobar 8, 2021)
Guddoomiyaha Hawsha Sharciga Guryeynta
Adeegyada Sharciga ee Gobolka Prairie, Inc.